ကောင်းကင်ကို: အငိုဒုက္ခ တိုင်းပြည်
Posted by Kaung Kin Ko at 1:04 PM
owow!!!!!!!!!!!!!great poem.good writing.how can I say ???????????ur poem mention the truth!!!!!!!!!!!!!
Brother! It is truth about our homeland. You are really brilliant poet!
the great poem ...
ဒီကဗျာလေးကိုဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာတယ်၊ နင့်နင့်သီးသီးခံစားလာရတယ်၊ ဆို့ဆို့နင့်နင့် နားလည်လာတယ်၊ နာနာကျင်ကျင် နာကျည်းလာရတယ်၊ ခံစားမှုတွေ သဘောတရားတွေနဲ့ သရုပ်မှန်တွေကို အရှိ အရှိအတိုင်း အမှန် အမှန်အတိုင်း မြင်လာမိပါတယ်။ လေးစားမိပါတယ် အကို ကောင်းကင်ကိုခင်ဗျား...
very good poem! I like it so much.
ဒင်းကြီးတို့အကြောင်းကို စဉ်းစားမိရင်တော့ ဟင်းးးးးးးးးး ဒင်းကြီးကိုတော့ မပြုတ်ပဲ အစိမ်းလိုက် ၀ါးစားချင်တယ် အစ်ကိုကော စားမလားး =)
:) ။တိုင်းပြည်ကြီးကို တညီတညွတ်ထဲ ရောင်းစားနေပြီ။
ကိုကောင်း အဲလို ထင်တော့လည်း အဲဒါအမှန်ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီ စာကြောင်းလေးကြောင့်မို့ခွင့်လွတ်ပါတယ် ။ :P
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော်ကို လူ့ ခွစာ လို့ ခေါ်ပါ ။
စကားလုံးတွေ ကြမ်းသွားမိခဲ့ရင် ကဗျာဖတ်သူကို တောင်းပန်ပါတယ်။ (မလိုပါဘူး)
စပါးလုံးတွေ ပြွမ်းသွားမိခဲ့ရင်တောင်မှ အစာငတ်သူအဖို့ ကောင်းပြန်ပါတယ်....(အဟဲ။ ဓါတ်ကူးသွားလို့။)
ဟားဟားဟား ရို .ရို့ 
ကောင်းလိုက်တာ ဗျို့ ဗျို့ 
ဆက်ရေးပါ လို့ လို့ 
အားရင် စကားလုံးတွဲတွေအကြောင်းပဲ ထိုင်စဉ်းစားနေလား အောက်မေ့ရတယ်
Excellent!!!! Thank you so much for the poem.
ကျတော်တို့ မြေညီထက်ရောက်ဖို့တောင် တက်နေရတယ်ဗျာ...ရင်နာတယ်
လေးစားတယ် ကျတော်လည်း အကို့လိုရေးတတ်ချင်လိုက်တာ
I really really love this poem. You are no two.
စကားလုံးတွေ ကောင်းလွန်းနေတာ ခဏခဏ မပြောတော့ပါဘူးနော်.....!!
စကားလုံးတွေ ကတစ်ကယ့် အံ့မခန်းပါပဲ...
အမှန်တွေချည်း ရေးထားတာမို့ comment တောင် မရေးချင်တော့ပါဘူး အကိုရယ်.. ဖတ်မိရင် ဘ၀ကြီးကို သနားတယ် အဟင့်
ကိုကောင်းကင်ရေ!.... ကျွန်တော် ကို ဒီကဗျာလေး တင်ပြခွင့် ပေးပါ... အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေး.... ခံစားမိတယ်...
အတွေးရော စာသားရောက အရမ်းကောင်းတယ်။ လေးစားပါတယ် ဗျာ
ဒီကဗျာက ကြိုးတန်းပေါ်က ပြုတ်ကျလာတဲ့ ဟစ်ဟော့သီချင်းတပုဒ်လိုပဲ…
အရသာတမျိုးရတယ်… ခါတိုင်း စတိုင်နဲ့ သိပ်မတူသလိုပဲ… ဒီအရသာလေးကလဲ တမျိုးကောင်း…
ကိုကောင်း..ကတော့ ကဗျာ ကဝေကြီးဘဲဗျာ....။
သိပ်ကောင်းတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ထက်ပိုပြီး တင်စားချင်ပါတယ်။ ဖန်တီးမှုစွမ်းအားနဲ့ အမှန်တရားပေါင်းလိုက်တော့ Excellent ပါပဲ :)
WOW...What can I say?? You are just brilliant !!
You do give the readers something extra !!
You are one of the most talented people I have ever known..
You deserve the word "genius"
ဖတ်ရတာ ကျေနပ်တယ်ဗျာ ၊၊
good job Dudy ...
ကဗျာအတွေးထဲမှာ ရဲရဲတောက်နေတဲ့ သွေးကို မြင်ရတယ်
အကိုရေ အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေး ပါ။ အဖြစ်မှန်ကို ထိထိမိမိ ရေးထားတာလေးစားစရာပါ။ အားပေးလျှက်ပါ။
ကျနော့် blog အတွက် သုံးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
yoyo! absolutely awesome
အရင်က ဒီဘလော့ကို တခါပဲရောက်ဖူးတယ် ... ဒါပေမယ့် သေချာမဖတ်မိခဲ့ဘူး .... ကျွန်မခုမှ လိုက်မွှေနှောက်ကြည့်မိတယ် ...
ကဗျာပုံစံလေးက ဟစ်ဟော့သီချင်းဆိုလို့တောင်ရမယ် ..
စာသားတွေကောင်းသလို အဓိပ္ပါယ်တွေကလဲကောင်းတယ် ... အမှန်တွေကို စကားလုံးအားကောင်းကောင်းနဲ့ မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သလိုပဲ ... ဒီကဗျာကို ကဗျာဆရာနဲ့ထပ်တူနီးပါး ခံစားခဲ့ပါတယ် ....
ကောင်းကင်ကို ရဲ့ ကဗျာတွေဟာ တကယ် အသက်ပါတယ်ဗျာ၊ လေးစားပါတယ် ကျတော်ကြိုက်တဲ့ကဗျာတွေ ကို သုံးခွင့်ပြုပါ ။ ကျေဇူးတင်ပါတယ်
အခုအချိန်မှာ အလိုအပ်ဆုံး ကဗျာအမျိုးအစားပါပဲ။
You are very talented. I want you to write more poems. You are expressing the truth. Keep writing. I like your poem very much. Thank you very much for your sharing. You areabrilliant poet.
စကားလုံးတွေက လန်ထွက်နေတာပဲ.... အရမ်းကောင်းတယ် ကဗျာလေးက ထိချက် ပြင်းတယ်.. လေးစားတယ်ဦးဦးကောင်းရေ....
Excellent, Excellent and Excellent!!!
It has been quitealong time not to read such an effective poem. Thank you so much.
ခံစားရတာ ပြန်ကြားရယင် အမှန်စကား တွေမို့ စံထားချီးကျူးပါတယ်
အကိုရဲ့ စကားလုံးတိုင်းက အသက်ဝင်တယ် . .အားမာန်အပြည့်ရှိတယ် မျက်မှောက်ခေတ်ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာနဲ့ တူတူပဲ။ မျက်လုံးထဲ ကွင်းခနဲ ကွက်ခနဲကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရတယ် . . .ကောင်းလိုက်တဲ့ ရေးချက် . ..
it'sadope , , shit , ,straight it up ,, my man / / / / we still gotalot of works to do,.
ဖတ်နေရင်း အလင်းမဲ့ကောင်းကင်ကြီး မျက်စေ့ရှေ့မှာပြိုကျသွားတယ်
လှောင်ချိုင့်တွေထဲက အသံပေါင်းများစွာအတွက် နာကျည်းစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ထိထိမိမိ ရှိလွန်းတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်တယ်။
ကောင်းလွန်းလို့ ...... ဘယ်လိုပြောရမလဲတောင်မသိတော့ဘူးဗျာ
အငိုဒုက္ခတိုင်းပြည်မှာ အပိုပုဒ်မတွေများလို့ အမည်တောင်မဖေါ်၇ဲပဲ ဒိုင်နာဘယ်တော့မှောက်မလည်း လို့ စိတ်ဓါတ်ကို ဖင်ခုထိုင်ထားပြီး ခပ်ယိုင်ယိုင် စာရိတ္တမဏ္ဋိုင်ကို ကိုင်ထားရတယ် ၀ရမ်းထုတ်ထားတဲ့သံဃာတွေ ဆီ လည်းမသွားရဲတော့ အိမ်မှာပဲ မေတ္တာသုပ်ကို အသံမထွက်ပဲရွတ်နေရတယ်။ သူတော်ကောင်းတွေကြားယုံပ။ ဒီကဗျာက တိုင်းပြည်အတွက်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တကဲ့ပကတိအခြေအနေမှန်ပါပဲ
ကဗျာကို ဖတ်နေရင်း ကြက်သီးထမိတယ်၊ အရှိကို သိနေပေမယ့် ဒီလိုထောက်ပြနိုင်တာရယ် ၊ စိတ်ကူးစွမ်းရည် ရယ်ကို မချီးမွမ်းပဲ မနေနိုင်ပါဘူး၊ ကလောင်လက်နက်က ပစ်ခွင့်မရတဲ့ စစ်သည်တွေရဲ့ ဂျီ-သရီးထက် စွမ်းပါတယ်ဗျာ။
ကိုကောင်းကင်ကိုရေ ကဗျာ နောက်တကြိမ် ထပ်သုံးထားပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်။....။